कसैलाई पनि वैकल्पिक राजनीतिको ‘अपहरण’ गर्ने छुट छैन: मिलन पाण्डे - साँचो खबर Online Khabar
२०७८ भाद्र २०, आईतबार (२ हफ्ता अघि)
विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रिय संयोजक मिलन पाण्डेले विवेकशिललाई थाङ्नामा सुताउने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन् । आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् सम्झौतापत्रलाई लत्याएर, वैकल्पिक राजनीतिको अपहरण गरेर विवेकशिल आन्दोलनलाई थाङ्नामा सुताउने अधिकार कसैलाई नभएको संयोजक पाण्डेले बताए ।
उनले विज्ञप्मिा भनेका छन्, ‘सम्झौतापत्र नै लत्याउने हो भने हामी कुन नैतिकताले अध्यक्ष र संयोजक भएर बस्न सक्छौँ ? सामान्य नैतिकतालाई नै गुमाएर सुसंस्कृत राजनीति कसरी गर्न सकिएला ? सुसंस्कृत राजनीति गर्ने दलका नेतृत्वले उत्तर दिने बेला आएको छ । हामीमध्ये कसैलाई पनि वैकल्पिक राजनीतिको ‘अपहरण’ गर्ने छुट छैन । विवेकशील आन्दोलनलाई थाङ्नामा सुताउने अधिकार कसैलाई छैन ।’
संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजको अभियान चालेपछि विवेकशीलमा द्वन्द्व भएको थियो । हाल पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र धार एक पक्ष र संयोजक पाण्डे धार एक पक्ष भएर उभिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा अध्यक्ष मिश्रले नै पार्टीको विधान र घोषणापत्र विपरीत काम गरेर विधान र सम्झौतालाई धुजा धुजा बनाएको संयोजक पाण्डेको आरोप छ ।
अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डेबीच समान अधिकारसहित पार्टी एकीकरणको घोषणापत्र नै दस्तावेज भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । र, अहिले दुवैले सम्झौता नै उल्लंघन गर्ने हो भने पदमा बसिरहने नैतिकता नै नरहेको पनि उनले बताएका छन् ।
साथै, संयोजक पाण्डेले छिट्टै पार्टी मूलबाटोमा फर्किने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।
रेशम चौधरी जसपामै छन् ,जसपाले नै रेशम चौधरीको रिहाई गर्न पहल गर्नेछ:बाबुराम भट्टराई